इन्स्टाग्राम विश्वव्यापी सबैभन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो, जहाँ अधिकांश व्यक्तिहरू लाखौं फोटोग्राफहरू दैनिक प्रकाशित गर्छन्। यसको प्रयोग एन्ड्रोइड अनुप्रयोगको लागि विशिष्ट छ, जहाँसम्म, पीसीबाट इन्स्टाग्राम फोटोहरू कसरी अपलोड गर्ने भनेर जान्न सम्भव छ।
यो धेरै उपयोगी छ, जब तपाईं आफ्नो कम्प्युटरबाट तपाईंको सामाजिक नेटवर्कहरू प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, वा तपाईं सजिलै आफ्नो मोबाइल चलाउनुहुन्छ। वास्तवमा, के गरिन्छ हामीले अनुप्रयोगबाट प्रकाशित गरेर विश्वास गरेर कम्प्युटरलाई धोका दिन्छ। यद्यपि प्रक्रिया जटिल लाग्न सक्छ, यो एकदम सरल देखिन्छ।
हाम्रो पोष्ट पढिरहनुहोस् र तपाइँ प्रकाशित गर्न विभिन्न प्रक्रियाहरू थाहा पाउनुहुनेछ कम्प्युटरबाट इन्स्टाग्राम फोटोहरू।
गुगल क्रोमबाट फोटो कसरी अपलोड गर्ने
गुगल क्रोम ब्राउजरको रूपमा प्रयोग गर्दै, र यसबाट तपाईंको फोटोहरू अपलोड गर्न एकदम सरल छ। यो गर्न, तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
ब्राउजर खोल्नुहोस्। दायाँ माउस बटनको साथ ब्राउजर पृष्ठ र जहाँसुकै क्लिक गरेर ब्राउजर खोल्न सुरू गर्नुहोस्। विकासकर्ता खोल्नको लागि "निरीक्षण गर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस्।
मोबाइलमा संस्करण परिवर्तन गर्नुहोस्। "टगल उपकरण उपकरण पट्टी" विकल्प पट्टीमा फेला परेको दुई वर्ग वर्ग बटन क्लिक गर्नुहोस्।
फोटोहरू अपलोड गर्नुहोस् एकचोटि तपाईंले ब्राउजरमा मोबाइल विकल्प सक्रिय गर्नुभयो, तपाईं आफ्नो फोटोहरू क्यामेरा प्रतीकबाट प्रकाशन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ क्लिक गर्नुभयो भने, फाइल एक्सप्लोरर खुल्नेछ र तपाइँ आफूले चाहेको चयन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
मोजिला फायरफक्सबाट फोटोहरू कसरी अपलोड गर्ने?
मोजिला फायरफक्सको साथ, प्रक्रिया फरक छ। अर्को, म तपाईंलाई देखाउँछु कि अनुसरण गर्नका लागि के चरणहरू छन्:
एड-अन स्थापना गर्नुहोस् मोजिला फायरफक्समा एउटा एड-अन स्थापना गर्नु आवश्यक छ, जुन मोबाइल संस्करणमा मोड परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। प्लगइन "प्रयोगकर्ता एजेन्ट ओभरराइडर" हो।
विस्तार चयन गर्नुहोस्। तपाईं सहि उपकरणपट्टीमा विस्तार फेला पार्न सक्नुहुनेछ। प्रतीकमा क्लिक गर्नुहोस् र बिभिन्न प्लेटफर्महरू देखा पर्नेछन्, "आईओएस / सफारी एक्सएनयूएमएक्स" चयन गर्नुहोस्।
पृष्ठ ताजा गर्नुहोस् र फोटोहरू अपलोड गर्नुहोस्। मोबाइल संस्करण देखाउन सुरू गर्न पृष्ठ रिफ्रेस गर्नुहोस्। तपाईं पृष्ठको तल विभिन्न इन्स्टाग्राम सुविधाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए तपाईं क्यामेरा प्रतीक छोएर छवि अपलोड गर्न सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
सफारीबाट फोटो कसरी अपलोड गर्ने?
सफारीको मामलामा तपाईले अर्को मोडुलिटी प्रयोग गर्नुहुनेछ, र यी चरणहरू हुन्:
सक्रिय "प्रयोगकर्ता एजेन्ट"। यस ब्राउजरमा मोबाइल संस्करण प्रयोग गर्न तपाईले "विकास" मा क्लिक गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि "प्रयोगकर्ता एजेन्ट" चयन गर्नुहोस्। त्यस पछि तपाईले आवश्यक ब्राउजर संस्करण "सफारी - आईओएस 10 - आईफोन" छान्नु पर्छ।
आईफोन दृश्य। ब्राउजर संस्करण छनौट गरेपछि, तपाईले इन्स्टाग्रामका लागि आईफोन दृश्य पाउनुहुनेछ। पृष्ठको तल तपाईं विकल्पहरू देख्न सक्नुहुनेछ जुन ईन्स्टाग्रामले मोबाइलको लागि छ।
फोटो अपलोड गर्नुहोस्। अघिल्लो ब्राउजरहरूमा जस्तै तपाई क्यामेरा आइकन देख्नुहुनेछ, यसमा क्लिक गर्दा फाइल एक्सप्लोरर खुल्नेछ। त्यस पछि तपाईले चाहेको छवि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको खातामा अपलोड गर्नुहोस्।
म कसरी पीसीबाट इन्स्टाग्राममा फोटोहरू अपलोड गर्न सक्छु?
त्यहाँ उपकरणहरू छन् जुन तपाईंको कम्प्युटरबाट तपाईंको इन्स्टाग्राम खातामा फोटोहरू अपलोड गर्न मद्दत गर्दछ। ती मध्ये हामी पाउँछौं:
यो पीसीबाट इंस्टाग्राममा फोटोहरू अपलोड गर्न सबैभन्दा प्रयोग गरिएको उपकरणहरू छन्। योसँग बहु-प्रोग्रामर र बहु-खाता मोडमा प्रयोग हुनको लागि फाइदा छ।
यसको ठूलो नुकसान भनेको नि: शुल्क संस्करण हो सामग्रीलाई मात्र पहिलो7दिनको लागि प्रोग्राम गर्न अनुमति दिँदछ। जे होस्, यो सबै भन्दा राम्रोको रूपमा सूचीबद्ध छ।
तपाईको कम्प्युटरबाट फोटोहरू इंस्टाग्राममा अपलोड गर्नका लागि यो एक राम्रो उपकरण हुन जान्छ। यो उपकरणले प्रोग्राम भएका तस्बिरहरू प्रकाशित गर्दैन, तर तपाईंलाई प्रकाशनलाई स्वीकार गर्न एक चेतावनी वा सूचना पठाउँदछ।
यस उपकरणको नि: शुल्क संस्करण मात्र 30 प्रकाशनहरू प्रत्येक महिना अनुमति दिन्छ।
यो एक सफ्टवेयर उपकरण हो जुन विशेष रूपमा इन्स्टाग्राममा साझेदारी र सामग्री अपलोडको विकल्प खोज्नको लागि सिर्जना गरिएको हो। तपाईंले भर्खरै लग इन गर्नुपर्दछ, छवि चयन गर्नुहोस्, एक सन्देश जोड्नुहोस् र अपलोड गर्नुहोस्।
यस उपकरणको साथ इन्स्टाग्राममा फोटोहरू अपलोड गर्नुका साथै, तपाईं सम्पादन गर्न, क्रप गर्न, फिल्टर राख्न सक्नुहुन्छ। साथै, यसले तपाईंलाई प्रशासकहरूलाई खातामा नियुक्ति गर्न अनुमति दिन्छ, जबकि, नोक्सान यो हो कि नि: शुल्क संस्करणले मात्र तपाईंलाई7दिनहरू प्रकाशित गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रयोगकर्ता एजेन्ट स्विचर
यो गुगल क्रोमको एक विस्तार हो, त्यसैले यो आवश्यक छ यो ब्राउजर स्थापना भएको छ। यसको प्रयोग गर्न सक्षम हुनका लागि तपाईले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि यो सक्रिय छ, जहाँ तपाईले अनुकरण गर्न चाहानुभएको उपकरणको प्रकार छान्न यो सजिलो हुन्छ।
यो एक उत्तम उपकरण हो, तपाइँलाई पीसीबाट फोटो प्रकाशन कार्यक्रम गर्न अनुमति दिँदछ, तर तपाइँले यसलाई एन्ड्रोइड अनुप्रयोगको लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। सुविधा हप्ताको दिन द्वारा पोस्ट अनुसूची घण्टा अन्तराल मा।
यो फोटो अपलोड गर्नका लागि सब भन्दा शक्तिशाली उपकरण मध्ये एक मानिन्छ, र शेडग्रामको अपडेट संस्करण हो। यो एक भुक्तानी उपकरण हो, जे होस्, यो कम्पनीहरु को लागी धेरै उपयोगी छ, जहाँ तपाईं 50 खाताहरू एक साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यो एक उत्तम उपकरण छिटो र सरल छ, यसले उत्कृष्ट उपयोगिता प्रस्तुत गर्दछ। यद्यपि यो सत्य हो कि यो स्वचालित रूपमा प्रकाशित हुँदैन, यो प्रकाशनको बेलामा प्रकाशकलाई पुष्टि गर्न चेतावनी दिन्छ।
यसको एक लाभ यो छ कि यो स्वचालित रूपमा कार्यक्रम छान्छ जहाँ प्रकाशित गर्न अधिक अन्तर्क्रिया छ। थप रूपमा, यो छ सबैभन्दा लोकप्रिय ह्यासट्यागहरू प्रकाशित गर्न विकल्प।
पीसीबाट तपाईको इन्स्टाग्राममा फोटोहरू अपलोड गर्नका फाइदाहरू के हुन्?
तपाईको कम्प्युटरबाट फोटोहरू अपलोड गर्नाले धेरै बजार अवसरहरू प्रदान गर्दछ, मुख्य फाइदाहरूमध्ये:
तपाईंलाई स्मार्टफोनको आवश्यक पर्दैन: यसले तपाइँलाई पीसीबाट सीधा छविहरू अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ ब्राउजरको आराममा।
लेख्न सजिलो: केहि व्यक्तिहरूको लागि किबोर्डबाट टाइप गर्न सजिलो छ, छविहरू राख्न र ह्याशट्यागहरू राख्न।
समय बचत र उच्च उत्पादकता: यदि तपाइँ कम्युनिटी म्यानेजरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ भने, पीसीबाट खाताहरू प्रबन्धन गर्न सजिलो हुनेछ। थप रूपमा, तपाइँ तपाइँको उत्पादकता वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ।
थप्नुहोस् विशेष पात्रहरू: मोबाइल किबोर्डले सीमित संख्यामा अक्षरहरू समावेश गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो मूल पाठमा राख्नको लागि विशेष वर्णहरू उपलब्ध गर्न चाहनुहुन्छ भने, पीसीबाट इन्स्टाग्राम प्रयोगले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।
पीसीबाट तपाईको इन्स्टाग्राममा तस्विरहरू अपलोड गर्नका फाइदाहरू के हुन्?
पीसीबाट इन्स्टाग्राममा फोटोहरू अपलोड गर्न धेरै फाइदाहरू भए पनि, प्रयोगकर्ताहरूले केहि बेफाइदा पाएका छन्:
विकासकर्ता विकल्पहरू अनलक गर्नुहोस्: अनलक गर्न धेरै प्रक्रियाहरू छन् जुन पछ्याउनुपर्दछ। केही प्रयोगकर्ताहरूले पत्ता लगाएका छन् कि ती प्रक्रियाहरू प्रदर्शन गर्न उनीहरूलाई गाह्रो छ, यद्यपि सामान्यतया प्राय: तिनीहरू पूरा गर्न सक्षम भएका छन्।
यसमा सम्पादन फिल्टरहरू छैन: यो संस्करणले तपाईंको फोटोहरूको सम्पादनको लागि अनुमति दिँदैन, यसले केवल आधारभूत कार्य गर्दछ।
छवि संपादन कार्यक्रमहरू आवश्यक छ: फोटोहरू समान पृष्ठबाट सम्पादन गर्न सकिदैन, त्यसैले अपलोड गर्नु अघि उनीहरूलाई सम्पादन गर्नुपर्नेछ। यो प्रक्रिया सम्पादन कार्यक्रमबाट गर्नुपर्नेछ, सबै परिवर्तन गर्नुहोस्, बचत गर्नुहोस् र अपलोड गर्नुहोस्।
पीसीबाट इंस्टाग्राममा फोटोहरू अपलोड गर्न सिफारिसहरू
इन्स्टाग्राममा फोटोहरू अपलोड गर्न धेरै सरल छ, जे होस्, तपाईं राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं निम्न सिफारिसहरू अनुसरण गर्नुहुन्छ:
लोगो राख्नुहोस्: जब सम्भव हुन्छ, तपाईको छविहरूमा लोगो थप्नुहोस्। यो पढ्नयोग्य हुनुपर्दछ र यसले छविमा धेरै ठाउँ लिदैन, यो तपाईंको स्ट्याम्प हुनेछ।
एक हस्ताक्षर जोड्नुहोस्: यो लोगोको समान कार्य पूरा गर्दछ, यद्यपि यो तपाइँको छविहरू पहिचान गर्न उत्कृष्ट विकल्प हो।
यसले फन्ट समावेश गर्दछ: यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो प्रकाशनहरूमा आफ्नै शैली सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईंको आफ्नै फन्ट्स छनोट गर्नाले तपाईंको सामग्रीमा कर्पोरेट छवि थपियो।
फ्रेमहरू प्रयोग गर्नुहोस्: तपाईंको छविहरू वा फोटोहरूमा तपाईंको आफ्नै फ्रेमहरू थप्नाले तिनीहरूको आफ्नै शैली हुनेछ।
छविमा prolijity: सँधै छविहरू अपलोड गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई क्वाड्रेट गर्नुहोस् र विवरणहरू हाइलाइट गर्ने प्रयास गर्नुहोस् जुन यसलाई विशेष बनाउँदछ। तपाईंको छविहरूको गुणवत्ता धेरै महत्त्वपूर्ण छ र तपाईंको ब्रान्ड, उत्पादन वा सेवाको बारेमा धेरै बोल्दछ।
छविहरू मिलाउनुहोस्: यो सम्बन्धित छ कि छविहरू संयोजन गर्न उत्तम हो। यदि तपाइँ देख्नुहुन्न कि दुई छविहरू हाइलाइट गर्न सकिन्छ, केवल एउटा मात्र प्रकाशित गर्नुहोस् र यसलाई हाइलाइट गर्नुहोस्।
अन्तमा, पीसीबाट तस्विरहरु अपलोड गर्न को लागी एक धेरै विकल्प छ जसले बहु खाता प्रयोग गर्दछ। साथै, यो कम्प्युटरमा र अधिक घण्टा खर्च गर्नेहरूका लागि उपयोगी छ तिनीहरू त्यहाँबाट यसलाई ह्यान्डल गर्न रुचाउँछन्
यसको लागि केहि चरणहरू अनुसरण गर्न आवश्यक पर्दछ, यद्यपि, सामान्य रूपमा, तिनीहरूलाई पछ्याउन एकदम सजिलो छ। हामी आशा गर्दछौं कि हामीले प्रस्तुत गरेका विभिन्न रूपहरू तपाईंको लागि उपयोगी हुन्छन्कपडा कसरी पीसी बाट इंस्टाग्राम फोटो अपलोड गर्ने।